विश्वमा परम्परागत नेपाली कलाको स्थान उच्च छ : कुलपति कर्माचार्य | News Nepal
विश्वमा परम्परागत नेपाली कलाको स्थान उच्च छ : कुलपति कर्माचार्य
नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ‘नाफा’ मा तेस्रो कुलपतिका रुपमा कलाकार कान्छाकुमार कर्माचार्य नियुक्त भएका छन् । विसं २००४ मा जन्मिएका कर्माचार्य २०६६ सालमा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव बने । विसं २०२१ देखि चित्रकला साधनामा लागेका उनीसँग उनीसँग कला क्षेत्रका सङ्घसंस्थामा विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । उनै केके कर्माचार्यसँग ललितकलाको विकास र चुनौतीका विषयमा गरिएको कुराकानी :
कार्यक्रम पारित भएको हो । त्यो कार्यक्रम अगाडि गइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । फलोअप ‘अनुगमन’ गर्नुपर्छ । त्यसै त हुँदैन ।
राष्ट्रिय प्रदर्शनीको कुरा, तर अब त तयारी गर्नुपर्ने हो, ढिला भएन र ?
यो विवाद एकदम जटिल विवाद हो । केही वर्षअघि सरकारले नाफाको जग्गा सङ्गीत एकेडेमीलाई दिने भनी गरेको निर्णयमा हामी साह्रै दुखित छौँ । आम कलाकार दुखित छन् । हामीले यसलाई गुमाउनु हुँदैन । हामी आर्टिष्ट आफैँ सुकुम्बासी भएर अरुलाई पोस्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि ?
नेपाल सरकारको सो निर्णय नै दुःख लाग्यो भन्नुभएको हो ।
हो, त्यो क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो । हाम्रा पूर्वकुलपतिज्यूको कुरा अनुसार उहाँहरुकै समयमा सो निर्णय भयो, भित्री कुरा हामीलाई थाहा छैन । कमसेकम जग्गा दिने नै हो भने सल्लाह गर्नुपथ्र्यो । यो विषय सरकारले जिम्मा लिने कुरा हो, सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । नाफा मगन्ते हुने स्थिति त हुनु भएन । एकेडेमीहरु गठनभन्दा अघि नै भएको छलफलमा नाचघर सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने र नाफाले आफ्नै ठाउँ ‘सीता भवन, नक्साल, बालसङ्गठन रहेको भवन’ मा बस्ने भनेर हामी यहाँ आयाँैं । अब उहाँहरु ‘सङ्गीत एकेडेमी’ जानु भएन, त्यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरु बहालमा बस्दै आउनुभयो र समस्या बढ्दै आएपछि आत्तिनुभयो । यहाँ धेरै जग्गा छन् नि सरकारका, खोज्यो भने पाइहालिन्छ नि ।
सरकारलाई केको दुःख हुन्छ र ?
यो कुरा अदालतमा गएको छ, अदालतले एउटा फैसला गर्ला ।
दुवै गर्नुपर्छ । ट्रेडिशनल ‘परम्परागत’ भनेको हाम्रो आफ्नो पहिचान हो । समसामयिक भनेको विश्वको आजको स्थिति हो । हाम्रो पहिचानको हिसाबले चाहिंँ परम्परागत, मिथिला, पौभा, हाम्रै जनजातिका कलाकारका राम्रा राम्रा कलाहरु छन् । यस्तालाई हामीले प्रमोशन’प्रवद्र्धन’ गर्नुपर्छ । बाहिर लगेर प्रचारप्रसार पनि गर्नुपर्छ ।
प्रसङ्ग फेरौंँ, नेपाली कला समीक्षाको स्थिति यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ रु हाम्रा समीक्षकहरुलाई तालीम–प्रशिक्षणको आवश्यकता देख्नु हुन्छ ?
राससको सहयोगमा न्युज-नेपाल